Wali Mashiinka Buuxinta
Mashiinka Buuxinta Dhalada Dhalada ah
Dhalada PET -ka Yar Mashiinka Buuxinta Biyaha
3-5L Mashiinka Buuxinta Biyaha
5 Gallon Mashiinka Buuxinta Biyaha
Mashiinka Buuxinta Cabitaanka
Mashiinka Buuxinta Cabitaanka Kaarboonta leh
Mashiinka Buuxinta Tamarta
Khadka Buuxinta Casiirka Kulul
Dhalada PET Casiirka Mashiinka Buuxinta
Mashiinka Buuxinta Khamriga Khamriga
Mashiinka Buuxinta Dhalada Dhalada
Khadka mashiinka buuxinta Khamriga Dhalada
Khadka Mashiinka Shidaalka Shidaalka
Khadka mashiinka buuxinta saliida ee muhiimka ah
Mashiinka Buuxinta Daawada
10ml Mashiinka Buuxinta Dareeraha Indhaha
Mashiinka Buuxinta Khamriga
Kiniinka, Kaabsulka iyo Mashiinka Buuxinta Tablet
Tube Cream Mashiinka Daboolida
Mashiinka Buuxinta Dhalada Kareemka
Khadka Mashiinka Buuxinta Shaambada
Mashiinka Buuxinta Cidiyaha Polish
Mashiinka Nadiifiyaha Tooska ah ee Mashiinka Buuxinta
Mashiinka Mashiinka Qumman ee Tooska ah
Calaamadeeyaha Istiikarrada Wareegga Wareega HAY
Mashiinka Calaamadeeyaha Dhinacyada Sare ee Taxanaha HAP
Calaamadeeyaha Dhinacyada Hore iyo Dhabarka HAS
Hagaaji Calaamadeeyaha Calaamadeeyaha HDY Taxanaha
Calaamadeeyaha Istiikarada Taxanaha HAW
Mashiinka Calaamadinta Xabagta Qabow
Mashiinka Calaamadinta Dhalada Dhalashada kulul
Iska yaree Mashiinka Calaamadeynta Gacmaha
Mashiinka Xidhmada Biyaha Biyaha
Caanaha/Casiirka/Mashiinka Xirmada Badeecada Dareeraha ah
Suugada/Mashiinka Mashiinka Xidhmada Bacda
Mashiinka xirxirida budada
Digirta Coffee/Looska/Mashiinka Xirmooyinka Granules
Mashiinka Xidhmada Bacda Shaaha
Juice Sachet Buuxinta Mashiinka Mashiinka
Waa maxay mashiinka koodhku? Immisa ikhtiyaar ayaad haysataa si aad ugu darto daabacaha khadka buuxintaada?
Waa maxay Coder? Macaamiil badan ayaa weydiiyey su'aashan ka dib markay heleen xigashada mashiinka summada dhejiska. Koodhuhu waa daabacaha ugu fudud ee summadaha. Maqaalkani wuxuu kuu soo bandhigi doonaa dhowr daabacaha guud ee khadka wax soo saarka. 1, Mashiinka Codaynta/Codaynta Mashiinka koodhka ugu fudud waa co ...
Buuxinta qabowga Aseptic iyo buuxinta kulul
Waa maxay buuxinta qabow aseptic? Isbarbar dhigga buuxinta kulul ee dhaqanka? 1, Qeexitaanka buuxinta aseptic Buuxinta qabow Aseptic waxaa loola jeedaa qabowga (heerkulka caadiga ah) buuxinta alaabada cabitaanka ee xaaladaha aseptic, taas oo la xiriirta habka buuxinta kulul ee heerkulka sare sida caadiga ah loo isticmaalo un ...
Maxaa saameynaya nolosha adeegga mashiinka?
1. Ugu horrayn: Tayada mishiinka. Soo -saarayaasha kala duwan iyo mashiinnada noocyada kala duwan ayaa laga yaabaa inay isticmaalaan qaybaha elektiroonigga ah ee sumadaha iyo qaabaynta kala duwan. Mashiinku wuxuu ka kooban yahay farsamooyin badan, farsamo kastana wuxuu ku dhex jira qalabyo kala duwan. Heerka sare ...
Booqashada Macmiilka Kongo ee Mashiinka Buuxinta.
Intii lagu guda jiray Bandhiggii 2aad ee Soo -dejinta Caalamiga ah ee Shiinaha bishii Nofembar, 2019 wafdiga Afrika ayaa gaaray Shanghai oo ka yimid Kongo, Koonfur Afrika. Milkiilayaashu waxay booqdeen oo hubiyeen mashiinnada ay dalbanayaan, warshaddeennu waa bixiyaha mashiinka buuxinta ee jadwalka. Annagu, Mashiinnada Higee, oo ah sahay ku salaysan wax -soo -saar ...
Waa maxay faa'iidada iyo khasaaraha dhalada qalabka PLA iyo PET ee warshadaha buuxinta?
Iyada oo ku saleysan arrinta kala -soocidda qashinka, qiimaha iyo ilaalinta deegaanka, dhalada PLA ma tahay tan ugu weyn warshadaha cabitaanka? Tan iyo bishii Luulyo 1, 2019, Shanghai, Shiinaha ayaa hirgelisay kala -soocidda qashinka ugu adag. Bilowgii, waxaa jiray qof agtiisa qashinka qashinka ku caawiyay oo g ...
hadlay oo taagnaa
farqiga u dhexeeya nooca suunka rullaluuska iyo nooca booska go'an ee calaamadaynta dhalada wareega Inta badan, iibsadayaashu waxay ku wareeraan mashiinka calaamadeynta dhalada oo leh qalab hadlaya iyo mid go'an. Waxay calaamadayn karaan dhalo wareegsan. Waa maxay kala duwanaanshahoodu? Sideen u dooran karnaa mashiin ku habboon? Aynu galno ...
Sida loo helo kalsoonida macaamiisha iskaashiga koowaad
Marka laga hadlayo mashiinka warshadaha ee laga iibsado macaamiisha Ajanabiga ah, waa kuwee qodobbada ugu muhiimsan ee macaamilka? Hadda waxaan jeclaan lahayn inaan ka wada hadalno arrintan mid ka mid ah dacwadii aan dhowaan la kulannay. Gundhig: Cali wuxuu ka yimid mid ka mid ah soo -saareyaasha Los Angeles, USA, shirkaddu waxay u baahan tahay ...
Bandhigga Makiinadaha Chinia Moscow 2018
2017 Qalabka Farsamada & Bandhigga Badeecadaha Shiinaha
Expo Dhismaha 2017 Sri Lanka
Bandhigii 4aad ee Malaysia Malaysia ee KLANG
Bandhigga 2015 ee Dubai
Mashiinnada Higee (Shanghai) Co., Ltd.